facebook post | Ratopati
फेसबुकले पहिलो पटक राष्ट्रपति ट्रम्पको पोस्ट हटायो access_timeसाउन २२, २०७७
फेसबुकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको एउटा पोस्ट डिलिट गरेको छ । कोरोनाभाइरसको विषयमा ट्रम्पको पोस्टलाई फेसबुकले पहिलो पटक डिलिट गरेको हो । कम्पनीका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पको पोस्टले गलत सूचना साझा गरेको र नियमको उल्लंघन गरिरहेको थियो । ट्रम्पको पोस्टका साथै फक्...
जुमलाई टक्कर दिन फेसबुकको नयाँ ‘फिचर’, कसरी गर्नेछ काम ? access_timeसाउन २, २०७७
फेसबुकले अब भिडियो कलिङ प्लेटफर्म जूमलाई टक्कर दिनका लागि नयाँ फिचर ल्याइरहेको छ । अब मेसेन्जरमा यस्तै एउटा सुविधा जोडिने भएको छ जुन भिडियो कलिङ प्लेटफर्मसँग मिल्दोजुल्दो छ । अब मेसेन्जरमा पनि भिडियो कलिङको क्रममा अब स्क्रिन सेयर गर्न पाइनेछ । यो सुविधालाई एन्ड्रोइड...
फेसबुकमा प्रेमः ५५ वर्षका किसानको ३० लाख ‘स्वाहा’ access_timeजेठ २८, २०७७
एउटा निकै चर्चित भनाई छ, ‘प्रेम अन्धो हुन्छ’ । हो, यो भनाईलाई पुष्टि गर्ने एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ, भारतमा । ५५ वर्षका एक पुरुष फेसबुकमा एक युवतीको प्रेममा फस्छन् । सुरुवाती कुराकानी निकै छिटो अश्लील च्याट र भिडियोसम्म पुग्यो । त्यसपछि सुरु हुन्छ भिडि...
ऋषि धमलाकी श्रीमती एलिजाको आक्रोशः मानहानी गरेर मान्छे मार्न खोज्ने ? access_timeचैत १८, २०७६
सञ्चारकर्मी ऋषि धमलासँग विवाह गरेदेखि एलिजा गौतम बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छिन् । उनी कहिले आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण चर्चित भइन्, कहिले आफ्नो पहिरनका कारण । उनलाई सर्वाधिक चर्चित त उनको पहिलो फिल्म ‘अनुराग’ ले बनायो । फिल्ममा उनको अभिनयको अत्यधिक आलोचना ...
जुकरबर्गले आफ्नो काखीको पसिना सुकाउनका लागि कर्मचारीको समूह राखेको दाबी access_timeफागुन १२, २०७६
न्यूयोर्क । यसै महिना सार्वजनिक हुने एक किताबमा फेसबुकका मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्गले आफ्नो काखीको पसिना सुकाउनका लागि कर्मचारीको समूह राखेको दाबी गरिएको छ । टेक्नोलोजी जर्नलिस्ट स्टिवन लेवीको किताब फेसबुकः द इनसाइड स्टोरीमा यस्तो दाबी गरिएको हो । किता...
दिपाश्री निरौलाले भनिन्, ‘हाम्रो चलचित्रले दुर्लभ सफलता पायो, के यो अपराध हो ?’ access_timeअसोज ५, २०७६
हास्य अभिनेत्री तथा निर्देशक दिपाश्री निरौलाले आफ्नो चलचित्रले दुर्लभ सफलता पाएकोलाई अपराध भन्ने त ? भनेर प्रश्न गरेकी छिन् । आइतबार बिहानै आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा स्टेटस लेखेर उनले ‘आज म लेख्दैछु’ भनेर लामो स्टेटस लेखेकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, ...
चट्याङले मानिसलाई छोएको भयावह दृश्य क्यामरामा कैद (भिडियो) access_timeभदौ २, २०७६
‘चट्याङ पर्दा घरभित्रै बस है, बाहिर ननिस्क’ भनेर हामीलाई धेरैजसो आफन्तले सुझाउने गर्छन् । यस्तो किन भनिन्छ, धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । जसलाई थाहा छैन, उनीहरुका लागि यहाँ यस्तो घटनाबारे जानकारी दिँदैछौं जुन निकै भयावह छ । दक्षिणी क्यारोलिनाका रोमुलस म्या...